Ihe mere ụlọ ọrụ ihe nkiri ji daa, ihe na-aga n'ihu | Martech Zone
ikpeazụ DecemberM dere ihe mere ụlọ ọrụ ihe nkiri ji akụ afọ n'ala. Ikekwe m gaara ede ihe kpatara na ọ na-ada 'anyị'. O doro anya na nke a bụ ihe mbido nke ntinye ahụ. N’abalị taa, mụ na ụmụaka gara lee anya My Chemical Romance nke Caribbean, Igbe Onye Nwụrụ Anwụ. Ha gaara akpọ ya, Ndị Pirates nke Caribbean, Ka anyị mee ka mmiri ara ehi dị ka ọtụtụ ihe nkiri si na nke a ka anyị nwere ike.
Mmetụta dị na fim ahụ dị ịtụnanya ma ihe nkiri ahụ tọrọ ụtọ. Otú ọ dị, na-enweghị emebi ya maka onye ọ bụla, njedebe na-ekpe ọ bụla mepee maka ihe nkiri na-esote. Na nkenke, Elere m ihe nkiri 160 nke ihe nkiri na-enweghị njedebe. Ọgwụgwụ! Ọbụghị !!! Ọbụna m nọdụrụ site na kredit iji lelee ọmarịcha obere ihe nkiri ahụ na njedebe ma mechie ya. (Teknụzụ, nke ahụ hapụrụ akụkụ ọzọ nke ibé ahụ).
Ndo, Disney! Ble gha ya. Aga m na-eche Pirates Nkebi nke III na vidiyo. Ihere onwe unu kwesịrị ime unu n'ezie.
Kedu ihe nke a na - eme na azụmaahịa? Ihe ndị yiri ya na mkparịta ụka onye ọrụ ibe m, Pat Coyle, malitere na blọọgụ ya gbasara mgbasa ozi, ahịa, na ọdịbendị. Pat na-ekwu, “anyị nwere ike iji akụkọ ndị ahụ kọọrọ ndị mmadụ ihe ha chọrọ ịnụ, wee nweta ego ha maka mgbanwe mmezi nke nwa oge. Nke ahụ abụghị azụmahịa m chọrọ ịbụ. ”
Ihe nkiri sịnịma bụ ihe ọzọ na iwu a… anyị na-akwụ ụgwọ n'ezie maka mmetụta mmezu nke oge ahụ. Ka osi di, okwu a bu ihe mezuru ma obu ogwugwu. Cheedị ma ọ bụrụ na ịnwetaghị mmetụta nke nwa oge nke mmezu. N'ọnọdụ ahụ, ebumnuche bụ iduhie onye na-azụ ya na iji nweta ego ha. Nke ahụ bụ ihe mere ka m nwee nkụda mmụọ banyere fim a. Ebumnuche nke ihe nkiri ahụ abụghị naanị inweta ego karịa ka o siri mee fim ahụ, ọ bụ ihe mgbaru ọsọ bụ ịhapụ m ka m ghara imezu ya ka m wee tinyekwuo ego na Osote ihe nkiri, kwa!
Ọ bụbu na a na-eme ihe nkiri sịnịma mgbe ị na-ede ihe na-aga n'ihu ma ọ bụ na-eme ihe ọzọ. Ugbu a, ọ bụ akụkụ niile nke ọrụ ịme fim. Anyị atụkwasịla uche na 'nka' ma merie site na ijikọ nke mba na ihe nkiri. Ma ọ dịkarịa ala, ọtụtụ ndị na-enye akụkọ ozi nwere nkwa ịkwụghachi ego. Oge agafeela maka ego m nwetara maka ihe nkiri a.
Tags: Igbe Nwụrụ AnwụDisneyahịa fimmoviesMy Chemical Romance nke Caribbean
Sep 4, 2006 na 9: 34 AM
You maara ka Hollywood si akọwa Art Movie?
Ọ bụrụ na ọ naghị enweta ego, ọ bụ Art Movie.
Nke ahụ kwuru, aghaghị m ikwupụta na, mgbe mụ na nwunye m nwere ohere ịhụ ihe nkiri ọnụ, anyị hụrụ ndị Pirates n'ezie. Obi dị gị ụtọ na ya.
Maka m, Pirates bụ ihe ọchị na-achọ ihe nkiri. Ọ naghị ekwu na ya karịrị akarị. Dika ihe nkiri di otua achoputara m ya.